OTU ESI EJIKỌ LAPTỌỌPỤ NA LAPTỌỌPỤ SITE NA WIFI - WINDOWS - 2019
Otu esi jikọọ laptọọpụ abụọ site na Wi-Fi
Mgbe ụfọdụ, enwere ọnọdụ mgbe ịkwesịrị ijikọ kọmputa abụọ ma ọ bụ laptọọpụ na ibe gị (dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnyefe ụfọdụ data maọbụ naanị igwu egwu na onye na-ekwenye ekwenye). Ụzọ kachasị mfe na nke kachasị mfe iji mee nke a bụ ijikọta site na Wi-Fi. N'isiokwu taa, anyị ga-eleba anya iji jikọọ PC abụọ na netwọk na Windows 8 na nsụgharị ọhụrụ.
Otu esi ejikọ laptọọpụ na laptọọpụ site na Wi-Fi
N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otu esi ejikọta ngwaọrụ abụọ n'ime netwọk site na iji ngwaọrụ ngwaọrụ. Site n'ụzọ, na mbụ nwere software pụrụ iche nke mere ka ị jikọọ laptọọpụ na laptọọpụ, ma ka oge na-aga, ọ bịara bụrụ ihe na-adịghị mkpa ma ugbu a, ọ na-esi ike ịchọta. Na kedu, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla mere nnọọ iji Windows.
Ihe kacha mkpa maka usoro a nke ịmepụta netwọk bụ ọnụnọ nke ndị nkwụnye ọkụ ikuku na ngwaọrụ niile ejirila (echefukwala ime ka ha nwee ike). Ma ọ bụghị ya, soro ntụziaka a abaghị uru.
Njikọ site na rawụta
Ị nwere ike ịmepụta njikọ n'etiti laptọọpụ abụọ site na iji mgbanaka. Site na ịmepụta netwọk mpaghara dị otú a, ịnwere ike ikwe ka ịnweta ụfọdụ data na ngwaọrụ ndị ọzọ na netwọk.
Nzọụkwụ mbụ bụ ijide n'aka na ngwaọrụ abụọ ejikọrọ na netwọk nwere aha dị iche, mana otu ọrụ ọrụ ahụ. Iji mee nke a, gaa "Njirimara" usoro eji PCM site na akara ngosi "Kọmputa m" ma ọ bụ "Kọmputa a".
Chọta na kọlụm ekpe "Ntọala usoro ntọala".
Gbanwee na ngalaba "Aha Kọmputa" ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gbanwee data site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Ugbu a, ị ga-abanye "Ogwe njikwa". Iji mee nke a, pịa igodo ọnụ na keyboard Nweta + R ma tinye na igbenjikwa.
Chọta mpaghara ebe a. "Network na Internet" ma pịa ya.
Gaa na windo "Network and Sharing Center".
Ugbu a, ị ga-aga nhazi ntọala dị elu. Iji mee nke a, pịa njikọ kwekọrọ na akụkụ aka ekpe nke windo ahụ.
Lee gbasaa taabụ ahụ "Netwọk niile" ma kwe ka ikere òkè site na itinye igbe nlele pụrụ iche, ma ị nwekwara ike ịhọrọ ma njikọ ahụ ga-adị na paswọọdụ ma ọ bụ n'enweghị. Ọ bụrụ na ịhọrọ nhọrọ mbụ, mgbe ahụ naanị ndị ọrụ na akaụntụ nwere paswọọdụ na PC gị ga-enwe ike ile faịlụ ndị ahụ. Mgbe ị na-azọpụta ntọala, malitegharịa ngwaọrụ ahụ.
N'ikpeazụ, anyị na-ekekọrịta ohere iji ọdịnaya nke PC gị. Pịa aka nri na folda ma ọ bụ faịlụ, wee gosi "Ịkekọrịta" ma ọ bụ "Access Access" ma họrọ onye ozi a ga-adị.
Ugbu a, PC niile ejikọrọ na rawụta ga-enwe ike ịhụ laptọọpụ gị na ndepụta nke ngwaọrụ na netwọk ma lelee faịlụ ndị a na-akọrọ.
Kọmputa na kọmputa site na Wi-Fi
N'adịghị ka Windows 7, na nsụgharị ọhụrụ nke OS, usoro nke ịmepụta njikọ ikuku n'etiti ọtụtụ kọmpụta dị mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ dị mfe ịmepụta netwọk ahụ site na iji ngwaọrụ ọkọlọtọ ejikere maka nke a, ma ugbu a ị ga-eji "Iwu iwu". Ya mere ka anyi malite:
Kpọọ "Iwu iwu" na ikike njikwa - iji Chọọ chọta ngalaba a kapịrị ọnụ ma pịa ya na aka nri ka ịhọrọ "Na-agba ọsọ dị ka onye nlekọta" na ndokwa menu.
Ugbu a, dee iwu na ntuziaka na-egosi na pịa na keyboard Tinye:
netsh wlan ngosi ọkwọ ụgbọala
Ị ga-ahụ ozi banyere ọkwọ ụgbọala netwọk arụnyere. N'ezie, nke a nile na-adọrọ mmasị, mana naanị eriri ahụ dị anyị mkpa. "Nkwado Ntanetị Akaụntụ". Ọ bụrụ na esote ya ederede "Ee"mgbe ahụ, ihe niile dị mma ma ị nwere ike ịga n'ihu; laptọọpụ gị na-enye gị ohere ịmepụta njikọ n'etiti ngwaọrụ abụọ. Ma ọ bụghị, gbalịa imelite ọkwọ ụgbọala (dịka ọmụmaatụ, jiri ngwanrọ pụrụ iche iji wụnye ma melite ndị ọkwọ ụgbọala).
Ugbu a tinye iwu n'okpuru, ebe aha bụ aha nke netwọk anyị na-eke, na paswọọdụ - paswọọdụ na ya dịkarịa ma ọ dịkarịa asatọ ederede ogologo oge (ehichapu ọnụ).
netsh wlan set mode hostednetwork = ekwe ka ssid = "aha" igodo = "paswọọdụ"
N'ikpeazụ, ka anyị malite ọrụ nke njikọ ọhụrụ site na iji iwu dị n'okpuru ebe a:
netsh wlan malite ọrụ ụlọ ọrụ
Iji mechie netwọk ahụ, tinye iwu na-esonụ na njikwa:
netsh wlan kwụsị ọrụ nhazi
Ọ bụrụ na ihe niile rụpụtara gị, otu ihe ọhụrụ nke aha netwọk gị ga-apụta na laptọọpụ nke abụọ na ndepụta nke njikọ dịnụ. Ugbu a ọ na-anọgide na-ejikọta ya na Wi-Fi nkịtị ma tinye paswọọdụ ahụ akọwapụtara.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ịmepụta njikọ kọmputa na kọmputa bụ ihe dị mfe. Ugbu a, ị nwere ike igwu egwu na enyi gị na egwuregwu egwuregwu ma ọ bụ naanị ịnyefe data. Anyị nwere olileanya na anyị nwere ike inye aka na ngwọta nke mbipụta a. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla - dee banyere ha na ihe ndị anyị ga-aza.